Jimcaha Madow: Waxay bixisaa koorsooyin onlayn ah oo loogu talagalay hal-abuurka 'Domestika' Abuurista khadka tooska ah
Aasaaska 'Domestika Basics': waa fursad qaas ah oo aamin ah oo Jimcaha Madoow ah
Abuurista khadka tooska ah | | Khayraadka
Sida laga soo xigtay daraasad ay sameeyeen bogga isbarbardhiga qiimaha Finder, qiyaastii ah 52% dadka wax ka iibsada Jimcaha Madow waxay aakhirka ka qoomameeyaan mid ka mid ah "damacyadiisa". Qaaciddo aan la khaldami karin si looga badbaado xaddiga bixinta ee wejigaaga oo dhoola cadeynaya iyo damiir nadiif ah ayaa ah inaad maal gashato waxbarashadaada, tanina waa tan saxda ah waxa weeye websaydhada koorsooyinka internetka ee loogu talagalay hal-abuurka Domestika ayaa na siiya iyagoo bixiya Black Friday.
Domestika waa beel ka mid ah hal abuurka Isbaanishka oo bixiya koorsooyin khadka tooska ah ah oo ay wax ku bartaan xirfadlayaal waa weyn oo ku takhasusay hal abuurka, oo ay ku jiraan tirooyin caan ah sida Isteeer Cross, Ji Lee o alex trochut- sidoo kale waxay leeyihiin qaab koorso loo yaqaan Aasaaska Domestika, wuxuu diirada saaray sharaxaad ka soo bilaabida hawlgalka software inta badan ay adeegsadaan bulshada hal abuurka leh, laga bilaabo kuwa aasaasiga ah sida Adobe Photoshop ilaa kuwa kale a priori ka dhib badan sida Cinema 4D. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loogu talagalay dadka isticmaala ee aan aqoon hore u lahayn barnaamijyadan.
Koorsooyinka aasaasiga ah ee 'Domestika Basics' waxay u dhisan yihiin xoogaa ka duwan waxyaabaha kale ee lagu martiqaaday barnaamijka 'Domestika': Aasaasiyadeed kastaa markooda waxa ku jira koorsooyin taxane ah, mid kasta oo ka mid ah oo ka hadlaya dhinacyada kala duwan ee barnaamijka iyo, kaliya inta lagu jiro Black Friday ayaa dhammaantood lagu heli doonaa qiimo gaar ah € 9,90. Taasi waa, oo leh a 75% dhimis.
1 Koorsadu waxay bixisaa Jimcaha Madow
1.1 Hordhaca Adobe Photoshop, waxaa qoray Carles Marsal
1.2 Hordhaca Adobe Illustrator, waxaa qoray Aarón Martínez
1.3 Hordhaca Adobe InDesign, waxaa qoray Javier Alcaraz
1.4 Hordhaca Shineemo 4D, waxaa qoray Francisco Cabezas
1.5 Adobe Photoshop oo loogu talagalay naqshadeynta websaydhka, oo uu qoray Arturo Servín
1.6 Hordhaca Adobe XD ee barnaamijyada moobiilka, waxaa qoray Arturo Servín
Koorsadu waxay bixisaa Jimcaha Madow
Kuwani waa qaar ka mid ah waxa, fekerkeenna, ay yihiin waxyaabaha ugu xiisaha badan ee aasaasiga ah ee 'Domestika Basics' si looga faa'iideysto Jimcaha Madow:
Hordhaca Adobe Photoshop, waxaa qoray Carles Marsal
Barnaamijku wuxuu ku bilaabay dhammaantood naqshadeeyayaal fara badan, Adobe Photoshop ayaa ugu fiican software daaweynta, hagaajinta iyo abuurista sawirro dhijitaal ah ee suuqa iyo in kastoo aad horayba u isticmaashay ka hor, tan Asaaska aasaasiga ah ee koorsooyinka 5 waxaad kaheli doontaa awooda sawirka gacanta Carles Marsal, farshaxan yahan caan ah oo muqaal ah iyo bare bare ah oo diirada saaray dib u hagaajinta hal abuurka iyo rinjiyeynin.
>> Iibso koorsada riix halkan
Hordhaca Adobe Illustrator, Waxaa qoray Aarón Martínez
Haaruun waa macallin khibrad leh - maahan wax aan waxba haysan shan koorso oo kale gudaha Domestika— iyo tan Asaaska aasaasiga ah ee koorsooyinka 6, wuxuu ku siin doonaa booqasho dhammaystiran oo qoto dheer oo ah Tafatiraha sawirada vector inta badan waxaa adeegsada nashqadeeyayaasha iyo sawir qaadayaasha adduunka, oo loogu talagalay inay abuuraan warbaahinta dhijitaalka ah iyo kuwa daabacan labadaba.
Hordhaca Adobe InDesign, Waxaa qoray Javier Alcaraz
Haddii waxa ku dhaqaaqayaa ay yihiin naqshadaynta tifaftirka, Javier Alcaraz waxaad ka heli doontaa gurukaaga. Naqshadeeye tifaftire caan ah iyo sawirqaade yaqaan ayaa tan soo bandhigaya Asaaska aasaasiga ah ee koorsooyinka 5 diirada saaray software ee naqshadeynta bogga loogu talagalay warbaahinta daabacan iyo kuwa dhijitaalka ah ee ka socda Adobe suite, kaas oo aad ku abuuri karto boodhadh dijitaal ah illaa buugaag daabacan.
Hordhaca Shineemo 4D, waxaa qoray Francisco Cabezas
El Naqshad 3d waxay umuuqataa inay ku cabsi galinayso jaleecada hore laakiin, tan Asaaska aasaasiga ah ee koorsooyinka 6 Laga soo bilaabo Cinema 4D, waxaad u boodboodi doontaa cabirka seddexaad waxaadna abuuri doontaa tirooyin iyo dhaqdhaqaaqyo u gaar ah si fudud oo caqli gal ah Francisco Cabezas, oo ah naqshadeeye guud oo 3D ah iyo borofisar ka tirsan iskuulada qaabeynta kala duwan.
Adobe Photoshop oo loogu talagalay naqshadeynta webka, waxaa qoray Arturo Servín
In kastoo ay jiraan codsiyo badan oo gaar ah oo loogu talagalay qaabeynta webka, waxaa jira a oday aamin ah taasi weligeed ma guul darreysato mana aha wax kale oo aan ahayn Adobe Photoshop lafteeda. Iyada oo tan Asaaska aasaasiga ah ee koorsooyinka 6 waxaad ku baran doontaa sida loo maareeyo Photoshop aragtida naqshadeeyaha websaydhka sida Arturo Servín, kaasoo ku bari doona qaabeynta iyo qaabeynta shabakadaha jawaab dareen ahaan, xitaa haddii aadan aqoon hore u lahayn qaabeynta webka ama Photoshop.
Hordhaca Adobe XD ee barnaamijyada moobiilka, waxaa qoray Arturo Servín
Adobe XD waa mid ka mid ah barnaamijyada cusub ee Adobe Suite waxaana loo isticmaalaa kan tusaalaynta websaydhka iyo isdhexgalka arjiga. Koorsadan Domestika ee koorsooyinka 5 ah, sidoo kale waxaa ku baray Arturo Servín, waxaad baran doontaa inaad ka sameysato codsi mobilo ah xoqida, kuna dhamaato nooc is-dhexgal ah oo ka tirsan barnaamijkaaga.
Kuwani waa qaar ka mid ah koorsooyinka ugu xiisaha badan ee khadka tooska ah ee aan ku aragnay Domestika. Waxaan kugula talineynaa inaad gasho boggooda internetka si aad u ogaato koorsooyin aan dhammaad lahayn, oo ka bilaabma animation ilaa inta brandingeksperten, maraya dhammaan aagagga naqshadeynta. Waxaad hubtaa inaad naftaada wax u hesho!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Aasaaska 'Domestika Basics': waa fursad qaas ah oo aamin ah oo Jimcaha Madoow ah
Xitaa "Saamiga Dahabka" ama Saamiga Dahabka ahi ma awoodo inuu badbaadiyo naqshadda soo qaadista Tesla
Markii ay astaanta Microsoft ahayd ta kooxa birta ah